DEG DEG:- Xasan Sheekh oo tanaasulay iyo Farmaajo oo ku guuleystay doorashada madaxweynaha – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Xasan Sheekh oo tanaasulay iyo Farmaajo oo ku guuleystay doorashada madaxweynaha
Waxaa goordhaw lasoo gaba-gabeeyay wareega labaad ee tirinta codadka xildhibaanada labada Aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ay ku dooranayeen madaxweynaha cusub ee dalka hogaamin doonna 4-ta sano ee soo socota.
Tirada xildhibaan ee maanta codeeysay doorashada ayaa waxay gaarayeen illaa 327 xildhibaan oo ka kala tirsan labada Aqal ee baarlamaanka, waxaana wareega labaad ku tartamaayay musharixiinta kala ah; Xasan Sheekh Maxamuud, Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Maxamed C/laahi Farmaajo.
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hore loogu saadaalinaayay inuu ku guuleysan doonno doorashada ayaa waxa uu helay codad gaaraya 184 cod.
Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo goordhaw shaaciyay tirada cod ay kala heleen musharixiinta tartameeysay ayaa sheeegay in labada musharax ee ugu codka badan ay u gudbi doonaan wareega seddaxaad ee doorashada.
Inkastoo ahayd inay wareega seddaxaad u gudbaan Maxamed C/laahi Farmaajo iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa tanaasul sameeyay Xasan Sheekh oo helay codad aad uga yar codadka uu helay Farmaajo.
Maxamed C/laahi Farmaajo waa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee si rasmi ah loo doortay.
Madaxweyne Farmaajo ayaa hore dalka uga soo noqday ra’iisul wasaaraha dowladii KMG ahayd ee Soomaaliya, waxaana uu xilligaasi kasbaday shacab badan.
Xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta muujiyay inay fuliyeen dalabkii shacabka ee ahaa in Farmaajo u codeeyaan doorashada.
Codadka ay kala heleen seddaxda musharax ee wareega labaad ku tartantay:-
1- Maxamed C/laahi Farmaajo – Wuxuu helay 184 cod
2- Xasan Sheekh Maxamuud – Wuxuu helay 97 cod
3- Sheekh Shariif Sheekh Axmed – Wuxuu helay 46